Iwu ahụ: mmanya na-aba n'anya adịghị edozi nkwenye Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Iwu Kedu ihe nkwenye na-eme?
Kedu ihe na-eme ka abalị na-aga n'ihu na ma ma ọ bụ ma ndị na-eto eto dị njọ karịa mmanya? Mgbe mmechi ahụ dara ala na ha chọrọ ijikọ ọnụ, ole ka mmadụ ga-aga? Kedu mgbe 'no' pụtara 'ma eleghị anya'? Kedu iwu nke egwuregwu? Ini ewe ke ima ọtọn̄ọ ndọ? Ònye kpebiri?
Nkwenye na Mmanya
M gbara ajụjụ ọnụ otu nwanyị dị afọ 17 nwere ọnọdụ ahụike ọgụgụ isi dị nro sitere na ọgaranya bụ onye sonyere na klaasị na nkwenye na nwanyị. Anyị ga-akpọ ya Jen. O mesiri m obi ike na ya “maara oke oke” ya na mmanya. Mgbe ajụrụ ya ihe o bu n'uche, ọ zara, "Agaghị m a Iụbiga mmanya ókè nke na m ga-apụ". O kwuru na agbanyeghị na ọ "buru ibu" tupu ọ pụọ na oriri na ngwụsị izu ma nwee mmekọahụ na-enweghị nchebe, nke nwoke na nwanyị dị iche iche. O kwetara na ya na ụmụ okorobịa ahụ agaghị enwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na mmanya adịghị egbu ya. Ọ gaghịkwa ekwenye n'ụdị mmekọahụ, gụnyere mmekọahụ ike ike, nke ha na-achọkarị ka ọ bụrụ. Ma o kwuru na ọ gaghị ama nwoke ikpe maka 'ịgba ya ume' inwe mmekọahụ n'ọnọdụ ndị ahụ n'ihi na ọ na-a beenụ mmanya ma na-akpali agụụ mmekọahụ. N'uche ya o kwuru na ọ ga-enwerịrị nkwenye ọbụlagodi na ọ kwara ụta na-esote ụbọchị. Ndị a bụ nnukwu mmemme redio abụọ nke BBC gbasara nkwenye na afọ dijitalụ na-enye aka ịkọwa ụdị nsogbu a: Na-agafe n'ahịrị na Ndoghari Iwu.
Nye onye toworo eto, 'ịmara ókè mmadụ withụbigara mmanya ókè' nwere ike ịpụta ịkwụsị ịchịkwa ikike nke ikwenyere ihe ọ bụla. Esemokwu ndị dị iche iche dị na ya na-eme ka okwu banyere nkwenye bụrụ nsogbu nye ndị juri n'ụlọ ikpe maka idina mmadụ n'ike. Ajụrụ m Jen ihe mere o ji tinye ihe ize ndụ nke afọ ime ma ọ bụ ọrịa site na iji ọgwụ mgbochi. O zaghachiri na nna ya ga-ewe iwe ma ọ mata na obere nwa ya nwanyị na-enwe mmekọahụ. O kwuru na ọ bụrụ na ọ tụrụ ime, ọ ga-ete ime, nne ya ga-enyere ya aka pụta. O chekwara na ọ bụ "mkparị" ịkwụsị otu nwa okorobịa n'ụzọ ya ozugbo ha bido isutụ onwe ha ọnụ wee gafere n'ọzọ ọzọ. Yabụ n'agbanyeghị mkparịta ụka n'ụlọ akwụkwọ n'okwu a, na omume ọ na-atụ ụjọ gbasara etu ndị mụrụ ya ga-esi meghachi omume na nrụgide ndị ọgbọ ị toụbiga mmanya ókè, na-ewere ya dị ka onye na-adịghị mma, ma nwee 'ọchị' n'abalị n'abalị dị mkpa karịa atụmatụ nke ya maka ihe ize ndụ ahụike nye onwe ya. Nke a bụ echiche nke ụbụrụ dị afọ iri na ụma dị ize ndụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ mmejọ iji nwee mmekọahụ gbasara ike na-enweghị nkwenye, ndị inyom na-emekarị mkpesa na a na-amanye ha n'ime ya. Research na-egosi na 'nkwenye' siri ike ike inwe mmekọahụ gbasara mmekọahụ bụ ihe a na-ahụkarị taa n'etiti ndị na-eto eto dị afọ 16-18. Ndị na-eto eto na ụmụ nwanyị na-akpọ ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị dị ka isi ihe na-akpali ha. Ọ bụ ezie na ha maara na ọ "na-ewute ụmụ nwanyị nke ukwuu", ụmụ okorobịa ka na-agbali ike ha nile kwere 'ụmụ nwanyị ime ka ha mee ya. Ọbụna ụmụ okorobịa eyighị ka ha na-ekpori ndụ na ya. Nke a Mkparịta ụka ntanetị nke 10 na onye ndu ndu na-akowa ihe banyere ihe ha choputara. Naanị otu nwanyị kwetara na ọ na-atọ ya ụtọ. Maka ụfọdụ ụmụ-okorọbịa, ego nke inweta “nku-aja aja” ha na nke ha na ndị nwunye ha nyere ha dị mkpa karịa ịzụlite mmekọrịta ha na onye ha na ha nwere mmekọrịta chiri anya.
Njide onwe onye bụ ihe ịma aka nye ma ndị inyom ma ndị nwoke na oge kachasị mma, ma karịsịa na nnọkọ ntụrụndụ nke ndị na-eto eto. Ọ gwụla ma e kpebielarị atụmatụ iji dochie esemokwu tupu oge eruo, ọ ga-esiri ike ịgidesi nkwenye siri ike ike mgbe agụụ mmekọahụ na-atụgharị anya na mgbe anyị chọrọ ka a hụ anyị dị ka ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na 'dị jụụ'.
Otú ọ dị, agụmakwụkwọ karịa mmetụta nke ịṅụ mmanya na nkwenye na otú e si egosi na ị na-enwe nsogbu dị mkpa. Ịkụziri ndị ọkachamara 'ọzụzụ' na otú ị ga-esi kwanyere onye ọzọ ùgwù ga-abụ nnukwu ọganihu. Ọtụtụ nnyocha gbasara àgwà ndị na-eto eto kpọrọ maka ụdị agụmakwụkwọ a.
<< Gịnị bụ nkwenye na Iwu? Mmekọahụ >>